Maxay tahay sababta basaasiinta WhatsApp-ka ay Iiraan u daneynayaan | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay tahay sababta basaasiinta WhatsApp-ka ay Iiraan u daneynayaan
Maxay tahay sababta basaasiinta WhatsApp-ka ay Iiraan u daneynayaan
Jabsashada WhatsApp-ka, dhibaateynta maraakiibta xamuulka ee sida saliida, go’aanka Mareykanka ee lagu mamnuucayo ururka Ikhwaanul Muslimiinka iyo “qorshaha” ciidamada Mareykanka lagu geynayo Khaliijka ayaa dhammaan leh hal ujeedo, waxaana udub dhexaad u ah loolanka u dhaxeeya Israa’iil, Sucuudi Carabiya iyo Iiraan.
Milatariga Israa’iil ayaa waxa uu laf-dhabar u yahay warshedaha Israa’iil, sababtuna waxay tahay adeegga qaranka ee dhallinta dalkaasi ay soo maraan.
Milatariga Israa’iil ayaa waxa uu qaataa dhallinta da’da yar, ka dibna waxa uu qof kastaa eegaa halka uu ku habboon yahay ee looga faa’iideysan karo.
Aqoon yahannada ku takhasusay koombiyuutarada ayaa looga faa’iideystaa aqoontooda, waxaana lagu biiriyaa adeegga qaran, halkaa oo ay ka sii wadaan dagaalka dhanka intarneedka.
Marka ay ciidamada ka baxaan, waxa ay aqoontooda u sahashaa in ay furtaan shirkado sida shikradda NSO Group.
Shirkaddan NSO Group ayaa waxa ay sameysaa barnaamijyada iyo qalabka lagu jabsado koombiyuutarada, kuwaa oo ay ka iibiso dowladda, si ay ugu adeegsato la dagaallanka dambiyada iyo argagixisada.
Balse waxaa la siiyaa ruqsad ay dibadda ugu dhoofin karaan wax soo saarkooga waa haddii aysan wax u dhimayn amniga Israa’iil.
Waayadii hore qalabkaasi iyo barnaamijyadaasi koombiyuutarada loo isticmaalo lama ogolayn in laga iibiyo dalka Iiraan iyo waddamada kale ee Khaliijka.
Sababtuna waxa ay ahayd waayadii hore waddamada Khaliijka waxa ay garab taagnaa dadka reer Falastiin oo waxa ay ka soo horjeedeen Israa’iil.
Wixii ka dambeeyay kacdoonkii Carabta, waddamada Khaliijka marka laga reebo dalka Qadar waxa ay dhammaantood faraha kala bexeen qaddiyadda Falasdhiin, oo waxa ay la safteen Israa’iil, iyaga oo ka soo horjeesaday Iiraan.
Arrintaasi waxaa sii xoojiyay doorashadii la doortay madaxweyne Trump iyo ragga uu madaxa maray naceybka Iiraan ee maamulkiisa ku soo biiray, sida xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne Trump.
Waxaa jira warar badan oo sheegaya in xukuumadda Israa’iil ay doonayso in ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamadan Khaliijka, sidaa awgeedna waxay shirkaada NSO Group u ogolaatay in barnaamijkeeda Kombiyuutarada ay ka iibiso waddamadaasi Khaliijka.
Taa ka markhaati kacaya in dadka la jabsaday WhatsApp-kooga ay dhammaantood ahaayeen qareenno baaritaan ku hayay tacaddiayda dhaka xuquuqul Inskaanka ee ay gestaan waddamadan Khaliijka, mucaaradka Sucuudiga iyo muwaadiniin u dhashay dalka Qadari.
Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa dhaxalka siyaasadeed ee hoggaankiisa ku sheegay dedaalladiisa uu ku xakameynayo awoodda Iiraan, oo uu ku tilmaamay in ay tahay cadowga kaliya ee Israa’iil ee haatan jira.
Sucuudiga ayaa ka walwalsan quwadda Iiraan iyo nidaamka siyaasadeed ee ururka Ikhwaanul Muslimiinka oo halis ku ah nidaamka soo jireenka ah ee boqortooyada.
Maamulka Trump waxaa uu ka kooban yahay dad aad u neceb xukuumadda Iiraan iyo wax kasta oo xiriir la leh Iiraan. Mucaarad iyo muxaafidba, waxay ka mideysan yihiin cadaawadda Iiraan.
Dhanka kale, ganacsi xooggan ayaa soconaya.
Qaar ayaa hubka ka ganacsanaya, qaar kale waxa ay ku lug leeyihiin sicirka saliida, qaar kale waxay ku lig leeyihiin ganacsi siyaasadeed waana sida madaxda qaar ee ka tirsan Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo, kuwaasi oo fulinaya rabitaanka Sucuudiga ee ah in ururka Ikhwaanul Muslimiinka lagu daro liiska ururada argagixisada ahi.
Sida waddadii loo maray dagaalkii dalka Ciraaq ayaa haddana waxaa muuqanaya in qiil loo raadinayo sidii cadaadis lagu saari lahaa dalka Iiraan.
Waxyaabaha haatan dhacaya waa kuwo u muuqaal eg wixii dhacayay ka hor duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq.
Farqiga kaliya ee u dhaxeeya ayaa ah madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi, George W Bush ayaa mabda’ ahaan rumeysnaa in ay tahay waajibaad isaga saaran in bariga dhexe uu ku soo dabbaalo dimuquraadiyad. Si arrintaa ay ugu suurtagashana, waxa uu ku khasbanaa in xukunka laga tuuro Saadaam Xuseen.
Balse madaxweyne Trump aad ayuu uga duwan yahay oo marnaba ma rumeysno wax mabda’ ah, waxaana siyaasaddiisu tahay mid ganacsi ku saleysan.
Maadaama Trump muhiimaddiisu koobaad tahay danaha Mareykanka oo kaliya, waxay u muuqataa in marnaba uusan diyaar u ahayn in uu ku lug yeesho colaadda dambe oo bariga dhexe ka jirta.
Haddii ay dhacdana, waxa uu u baahanayaa in waxyaabo badan oo xun laga sheego Iiraan.
Habka ugu fiican ee arrintaa loo sameyn karana waa in sirdoonka uu soo uruuriyo xog.
Habka ugu wanaagsan ee lagu soo ururin karo xogtaasi sirdoonka ayaa ah in dhammaan xulufada Mareykanka ay soo basaasaan dad badan oo gobolka ku nool inta awooddooda ah.
Qaabka ugu wanaagsanna waa in la jabsado ama loo dhaca xogta taleefoonnada gacanta ee dhammaanteen aan sidanno.
Previous articleNinkan wax dhintay ma idiinla eg yahay” madaxawynaha dalka malawi oo goob fagaare ah kala hadlay dadkiisa
Next articleBerbera 1 , Maareeyaha wakaalada haamaha Shidalka oo soo dhaweeyay amarkii xukuumada